Maareeyaha Madbacadda Qaranka Oo Ka Hadlay Mushahar La’aanta Shaqaalihiisa Muddo 3 Biloodda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Maareeyaha Madbacadda Qaranka Oo Ka Hadlay Mushahar La’aanta Shaqaalihiisa Muddo 3 Biloodda
Published on March 31, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Maareeyaha Madbacadda Qaranka Siciid Saalax Shire, ayaa ka hadlay sababaha ay shaqaalaha Madbacadda qaranku muddo sadex bilood ah aanay mushahar u qaadan.
Taasoo uu ku sheegay in keentay markii adeegyo badan oo Madbacada qaranku dawladda u qaban jirtay in laga wareejiyay oo aanay adeegyada qaarkood imika qabanin iyo isbedelkii doorashadu keentay.
Waxaanu tilmaamay in ay kaga xidhan tahay ansixinta Miiyaaniyadda qaranka oo maanta la hor geeyay golaha wakiiladda.
Waxaa kaloo uu ku sababeeyay in ay jiraan shirkado daabacaadda ah oo gaar loo leeyahay ooiyaguna qabta adeegii ay qarankau hayeen oo wasaaradaha qaar ay u geystaan.
Halkan Hoose Ka Daawo Warkaasi: